Izindaba - Isibhedlela sidayisa u-e-cigarettes futhi sinendawo ekhethekile yokubhema i-e-cigarette!
Isibhedlela sidayisa u-e-cigarettes futhi sinendawo ekhethekile yokubhema i-e-cigarette!
I-UK iphinde yahola phambili ekusekeleni nasekukhuthazeni i-e-cigarettes.
Ababili babahlinzeki bezokwelapha abakhulu eBrithani muva nje baqale ukuthengisa ama-e-cigarettes eBirmingham, enyakatho yeNgilandi, bebabiza "njengesidingo sezempilo yomphakathi," ngokusho kombiko omusha eBrithani.
Izibhedlela, iSandwell General Hospital eseSibromwich neBirmingham City, ziqhutshwa yi-Ecigwizard, ethengisa imikhiqizo efana neJubbly Bubbly neLeaf kaWizard.
Ukukhuthaza ukusetshenziswa kogwayi be-e-cigarettes, lezi zibhedlela zombili sezisungule nezindawo ezikhethekile zokubhema ugwayi futhi zagcizelela ukuthi ukubhema ezindaweni ezibhemayo kuzohlawuliswa amakhilogremu angama-50.
Kunzima ukukholelwa ukuthi izibhedlela ezimbili ezinkulu kuleli dolobha zinezindawo zokubhemela ama-e-cigarettes, kuyilapho osikilidi bendabuko bebhekene nenhlawulo yenani ababhemayo ezindaweni zokubhema.
Ngaphezu kwamazwe angama-30 avimbele ugwayi we-e-cigaretti ngokuphelele. Kungani, umuntu kumele abuze, abakwazi yini ukulandela isibonelo sase-UK? Izimo zikazwelonke ziyazithinta izinguquko zenqubomgomo, kepha izinga lokuqwashisa umphakathi kanye nezinga lokuqwashisa lesigaba esibusayo aliguquki ngobusuku obubodwa.
E-UK, izikhungo eziningi nabaphenyi bebelokhu benza ucwaningo ngogwayi isikhathi eside. Eminye yayo igxile kakhulu ekutadisheni ukulinyazwa kwama-e-cigarettes kubantu, kanti amanye akhethekile ekutadisheni umthelela wama-flavour e-e-cigarettes kubantu ...
Abaphenyi bayazi kahle imiphumela nobungozi be-e-cigarettes, futhi bangaphambi kwezifundo eziningi ngemiphumela yezinhlobo ezahlukene zokuthanda izinto kanye namasekeni e-second-hand, lapho iningi lamazwe nezifunda zisakhuluma “ngombala we-e. osikilidi ”.
Ukusekelwa kwama-e-cigarettes kwaqhamuka ikakhulu ku-Public Health England (PHE) ngonyaka ka-2015, nokubuyekezwa okuzimele kwesigungu Esiphethe soMnyango Wezempilo e-UK. Ukuyeka ukubhema konga imali futhi kuthuthukisa nempilo. Ugwayi uyisidingo sezempilo somphakathi e-UK. ”
Umbiko ozimele we-e-cigarettes owashicilelwa ngonyaka owedlule wathola ukuthi umphakathi wezeMpilo eNgilandi ubheka i-e-cigarettes "njengengxenye encane nje yezingozi zokubhema" futhi wathi ukushintshela ku-e-cigarettes kuzoba kuhle empilweni.
Ngaphansi kwezinhlelo zikahulumeni, i-UK izobe isikhululekile kubantu ababhemayo bendabuko ngonyaka ka-2030. E-UK, imboni ye-e-cigarette isendleleni esheshayo.